Akwụkwọ Katidral nke Oké Osimiri: onye dere ya, ihe ọ bụ banyere, ihe odide | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ nke Katidral nke Oké Osimiri Ọ bụ nke mbụ onye edemede ahụ, Ildefonso Falcones ji wee mara ya na ụwa agụ akwụkwọ, na-enwe ihe ịga nke ọma na mba na mba. Eziokwu ahụ bụ na ọ gwakọtara iguzosi ike n'ihe na ịbọ ọbọ, ịhụnanya na aghụghọ, yana ihe ndị ọzọ na-akagbu ibe ha, mere ka ọ pụta ìhè.
Ma gịnị ka ọ bụ? Odi nma dika ha si ekwu? Ọ bara uru? Ọ bụrụ na ị na-eche ma ị hụbeghị mmegharị ma ọ bụ gụọ akwụkwọ ahụ, ihe anyị gwara gị nwere ike inyere gị aka iwepụ obi abụọ.
1 Onye bu ode akwukwo akwukwo Katidral nke Oke Osimiri
2 Gịnị bụ akwụkwọ nke Katidral nke Oké Osimiri banyere
4 Usoro na-agbanwegharị akwụkwọ
Onye bu ode akwukwo akwukwo Katidral nke Oke Osimiri
Dị ka anyị kwurula na mbụ, Onye dere akwụkwọ La Catedral del Mar abụghị onye ọzọ karịa Ildefonso Falcones. N'ezie, aha ya bụ Ildefonso María Falcones de Sierra. Ọ bụ ọkàiwu, ma bụrụkwa onye edemede Spanish.
Akwụkwọ mbụ ya bụ La catedral del mar, n’afọ 2006, mana nke bụ eziokwu bụ na mgbe ọ bụla ọ naara akwụkwọ, ọ ga-abụ ihe ịga nke ọma n’edemede.
Falcones bụ nwa onye ọka iwu na nwunye ụlọ. Mgbe nna ya dị afọ iri na asaa, nna ya nwụnahụrụ ya, ọ pụtakwara na ọ ga-ahapụ ọrụ egwuregwu ya, ebe ọ bụ onye na-agba ịnyịnya (bụrụkwa onye mmeri nke Spain na ịwụli). Nzọụkwụ ya ọzọ bụ ịmalite ịmụ akwụkwọ na Mahadum, o mere ya n'ụzọ dị ukwuu: ịmụ ogo abụọ: n'aka nke ọzọ, Iwu; nke ọzọ, Economic. Agbanyeghị, ọ chọpụtara n'oge na-adịghị anya na ọrụ ya dị na Iwu ahụ wee lekwasị anya na ọrụ a mgbe ọ na-arụ ọrụ n'ụlọ nzukọ bingo.
Gụsịrị akwụkwọ dị ka ọkàiwu, ịbụ onye edemede egbochighị ya ịga n'ihu n'ọrụ ya dị ka ọkàiwu n'ụlọ ọrụ iwu ya na Barcelona. N’ezie, gbalịa ịchịkọta ha nile. Ma obu na akwukwo mbu nke o weputara were ihe dika aro ise nye ya isi okwu. Agbanyeghị, na 2019 ọ bịara mara, na mwepụta nke akwụkwọ ọhụụ ya, The Soul Painter, na onye edemede ahụ nwere ọrịa kansa, na mpaghara atọ.
Nke ahụ, tinyere enweghị nsọpụrụ e nyere ya site na atụnye ya site na Treasury maka akwụkwọ ya, mere ka ihe ịga nke ọma ya daa.
Gịnị bụ akwụkwọ nke Katidral nke Oké Osimiri banyere
E debere akwụkwọ nke Katidral nke Oké Osimiri na narị afọ nke XNUMX na Barcelona na isi ya bụ iwu nke ụka Santa María del Mar. Otú ọ dị, dị ka akwụkwọ ọzọ a ma ama, dị ka Ogidi Earthwa, ọ bụ eziokwu na njikọ a bụ naanị ihe gbara ọkpụrụkpụ iji kwuo maka mmekọrịta nke ndị odide na-esonye, ​​ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi, n'ime ya.
Akwụkwọ ahụ na-elekwasị anya na ndị bi na mpaghara ịkụ azụ na Ribera de Barcelona ndị na-anwa ibi ndụ na ego na mbọ nke ọrụ ha. N'ebe ahụ ka ha mere mkpebi iwu ụlọ nsọ Marian, nke kasị ukwuu nke mara kemgbe, nke ha kpọrọ Santa María del Mar.
Ka ha na-arụ ọrụ a, onye mbido akwụkwọ akụkọ ahụ, Arnau Estanyol, na-agbanwe, na-eto ma hụ etu Barcelona si agbanwe. Ya na nna ya, Bernat, bụ nwoke nke onye nwe obodo bibiri ebibi nke wepụrụ ya ihe niile.
N'ime akwụkwọ akụkọ ahụ ị ga - ahụ etu ha si aga site na ndị gbara ọsọ ndụ na ndị a ma ama, kamakwa etu ndị iro chọrọ ịhụ ya ka egburu ya n'aka Njụta Okwukwe si amalite.
Katidral nke Oké Osimiri nwere ọtụtụ ihe odide bụ ndị, n'oge ụfọdụ na akwụkwọ akụkọ ahụ, bụrụ ndị protagonists. Agbanyeghị, ịkọ banyere ha niile ga-abụ ihe agaghị ekwe omume, yabụ anyị hapụrụ gị ndị anyị tụlere kasị mkpa nke akwụkwọ.
Arnau Estanyol: Ọ bụ onye a na-ekwenyeghị na akwụkwọ a. Ọ tolitere dị ka nwa amaala nọọrọ onwe ya na Barcelona mana nke ahụ apụtaghị na ọ gaghị alụ ọgụ megide ikpe na-ezighị ezi ọ na-ahụ.
Bernat Estanyol: Ọ bụ nna Arnau.
Joan Estanyol: Ọ bụ nwanne Arnay, nwa nkuchi Bernat.
Nna Albert: Onye ụkọchukwu nke Katidral. Ọ bụ nke na-enye Arnau ọhụụ dị umeala n'obi banyere ikpe na-ezighị ezi nke na-eme gburugburu ya na omume, n'ụzọ ụfọdụ, dị ka olu nke akọ na uche ya.
Francesca Esteve: Nne Arnau. O mechara dinaa ya n'ike, nke ahụ na-emekwa ya akwụna.
Aledis: Ọ bụ nnukwu ịhụnanya nke protagonist. Agbanyeghị, mgbe ha kewara ruo nwa oge, mgbe Arnau laghachiri ọ chọtara na ọ ghọrọla akwụna n'okpuru iwu nne ya.
María: Ọ bụ nwunye mbụ nke Arnau.
Sahat: Omume a dị ezigbo mkpa nye Arnau n'ihi na ọ bụ ya na-emeghe anya ya ka ọ nwee ọganihu. N'ezie, ọ bụ ohu.
Elionor: Nwunye nke abụọ nke Arnau na ngalaba nke Eze.
Usoro na-agbanwegharị akwụkwọ
I kwesiri ima na, na 2018, na onwa May 23, Antena 3 bidoro ịgbasa ozi n’oge nke oma (site na elekere iri nke abali rue etiti abali) mmeghari nke akwukwo Katidral nke Oke Osimiri.
Nke a Naanị ihe mejupụtara ya bụ nkeji iri asatọ dịka ihe dị ka nkeji iri ise n’ogologo Na eziokwu bụ na ọ bụ ihe ịga nke ọma, n'ihi na isi nke mbụ naanị nwere ihe dị ka nde mmadụ anọ.
Ugbu a, dị ka ọ na-adịkarị mgbe ọ bụla, enwere ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti usoro Antena 3 na akwụkwọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, na Puigs na akwụkwọ akụkọ ahụ nwere ụmụ 4, ebe n'ime usoro ahụ ha nwere naanị atọ. Ọzọkwa, ọnọdụ nke Margarida hụrụ ka a na-apịa ohu Habiba ihe na-apụtaghị na akwụkwọ ahụ.
E nwere ihe nkiri ndị ọzọ na-anaghị eme, ma ha na-eme ihe nkiri karịa ma ọ bụ iji meziwanye mmekọrịta dị n'etiti ndị agwa. N'ezie, enwere ụfọdụ ndị ka dị ndụ mgbe ha nwụrụ na akwụkwọ akụkọ ahụ na ndị ọzọ nwere ngwụcha dị iche na ihe Ildefonso Falcones na-agwa.
Yabụ, ugbu a ị matara ọtụtụ ihe dị na akwụkwọ Katidral nke Oké Osimiri, oge eruola ka ị mee mkpebi iji gụọ ya ma ọ bụ na ịgaghị. N’ezie, ị kwesịrị ịma na enwere akụkụ nke abụọ, Ndị nketa nke ụwa, nke ebipụtara na 2016. Anyị amaghị ma akụkụ nke atọ ọ ga-abịarute n’oge na-adịghị anya, mana ha bụ akwụkwọ ị nwere ike ịgụ n’enweghị nsogbu n’ihi na ha nwere nke ha mbido na njedebe ha. Yougụgo ya? Kedụ ihe ị chere maka ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Katidral nke Oké Osimiri Book